कोरोना महामारी: यी वेबसाइटसँग बच्नु हाेला, नत्र डाटा चोरी हुन सक्छ ! « Deshko News
कोरोना महामारी: यी वेबसाइटसँग बच्नु हाेला, नत्र डाटा चोरी हुन सक्छ !
दिल्ली प्रहरीको साइबर सेलले कोरोना भाइरसको बारेमा जानकारी दिने बहानामा मान्छेलाई ठगीको शिकार बनाउँदै केही त्यस्ता वेबसाइटहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
दिल्ली प्रहरीको साइबर सेलका अनुसार त्यस्ता वेबसाईटहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूमा क्लिक गर्दा कोरोनाको बारेमा जानकारी दिनेछ। तर, त्यहाँ धेरै चलाख ठगहरू भएको हुँदा उनीहरुले यस्ताे आपतकाे बेला पनि मानिसहरूलाइ ठग्ने उपाय निकालेका छन्।
अनुसन्धान पछि, प्रहरीले केहि वेबसाइटहरूको लिंक सार्वजनिक गरेकाे छ। र,कुनै पनि परिस्थितिमा ती लिंकहरूमा क्लिक नगर्न सल्लाह दिएको छ।
प्रहरीले डाटा चोरी वा फोन ह्याकको जोखिम रहने भन्दै साबधानी अपनाइन आग्रह गरेको छ । वास्तवमा, कोरोना भाइरस सम्बन्धी अधिकतम जानकारीको लागि व्यक्तिहरू विभिन्न वेबसाइटहरूमा हेरिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा, ठगी गर्ने मानिसहरूले परिस्थितिको फाइदा लिइरहेका छन् ,मानिसहरूलाई उनीहरूले ठगीकाे शिकार बनाउने।
यदि तपाईं कोरोना सम्बन्धी सही जानकारी चाहानुहुन्छ भने, तपाईं डब्ल्यूएचओको आधिकारिक वेबसाइट र नेपाल सरकारको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजतकका अनुसार धेरै भ्रामक सूचनाहरू मैसेन्जर प्लेटफर्ममा, व्हाट्सएपमा फैलिएका छन्, त्यस्ताबाट पनि टाढा रहनुपर्दछ।
प्रहरीले बच्न सल्लाह दिएको वेबसाइटहरूको सूची यहाँ छ:
प्रहरी भन्छ- यी डोमेनहरूमा क्लिक गरेर त्यहाँ व्यक्तिको सम्पूर्ण डाटा चोरी गर्ने वा फोन ह्याक गर्ने खतरा पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पुलिसको सल्लाह भनेको यी वेबसाईटहरूप्रति वास्ता नगर्नु। कोरोना सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी WHO काे साइटमा गएर लिन सकिन्छ।